Militariga Itoobiya oo go’doomiyey caasimadda gobolka Tigray Mekelle - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaMilitariga Itoobiya oo go’doomiyey caasimadda gobolka Tigray Mekelle
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa muujinaya in ay militariga dalkaasi kulaalayaann caasimadda gobolka gooni goosadka ah ee Tigray oo muddo sadex todobaad ah uu ka socday dagaal u dhexeeya maleeshiyada Tigray iyo ciidamada Itoobiya.
Saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Itoobiya ayaa u digay shacabka ku nool magaalada Mekelle ka hor inta aanay bilaabin duqayn baahsan oo sida la sheegay ay ciidamada qaranku la damacsan yihiin magaaladaasi.
Ciidamada ayaa doonaya in ay madaafiic ku garaacaan magaalada cirkana laga duqeeyo ka hor inta aanay ciidamada lugta ahi gelin magaaladaasi.
Kumanaan qof ayaa ku dhimatay dagaalka ka socda Itoobiya iyadoo tobanaan kun oo kalena ay qaxooti ahaan u galeen dalka Suudaan oo dalkaasi deris la ah.
Afhayeen u hadlay ciidamada xoogga dalka Itoobiya Redwan Hussein, ayaa sheegay in ay weli Tigraygu haystaan fursad ay isku soo dhiibaan ka hor intaan magaaladaasi Mekelle la gelin. Ciidamada Itoobiyia ayaa dhamaan gacanta ku dhigay magaalooyinkii waa waynaa ee gobolkaasi marka laga reebo caasimadda oo iminka la hareereerey.